Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-57
« Newsletter 56
Newsletter 57 »
publié par Admin, le jeudi 14 juillet 2016
Ho hitanareo ato ny dika mitovy amin’ny taratasy nalefa ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Malagasy momba ny tetikasa hitrandraka ao Soamahamanina sy Arivonimamo II ary Morafeno ary napetraka tao amin’ny Biraon’ny Fiadidiana ny Repoblika ny 8 jolay 2016 araky ny hita ao amin’ny fitomboka manamarina ny naharaisana azy anatin’ny rohy .pdf ao amin’ny faran’ity dika mitovy ity.
Tsy nisy valiny voaray aloha hatramin’izao.
Ny faha-14-n’ny volana Jolay dia maro ireo fianankaviana ao SoaMahamanina nametraka sora-baventy mangataka ny fampitsaharana ny tetikasa fitrandrahana ao an-tanànany hatrany amin’ny rindrina sy varavarana ary lavarangan’ny tranony.. Nendahin’ny mpitandro filaminana izany, niaraka tamin’ny fihanihana ny rindrin’ny tranon’olona tamin’ny toerana sasany, araka ny tatitra nataon’ny mpanao gazety nanatrika. Niteraka ny hatezeran’ny mponina izany fihetsika izany ka nanapa-kevitra izy ireo hanao rodobe handeha ho eny anoloan’ny biraon’ny kaominina mba haka ny peta-drindrina sady nanohy nitaky ny fampijanonana ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany ihany. Nitifitra etona mampilatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana sady nisambotra tovolahy iray. Mafy sady nafonja anefa ny fanoheran’ny mponina ao Soamahamanina io fisamborana io ka voatery namotsotra ilay tovolahy ny mpitandro filaminana.
Misaotra indrindra anareo mialoha amin’ny fanaparitahana ity taratasy ity
Raiso, Tompokolahy sy Tompokovavy, ny fisaorana sy haja atolotray anareo
Ny Collectif TANY - Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy
Ho an’Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina,
Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara
Antony:	Fangatahana fampihatona ny tetikasa fitrandrahana volamena, Zinc, Fer, Plomb, ary Berillium ao Soamahamanina sy fanafoanana ny fahazoan-dalana hitrandraka laharana 38234,19970 sy 37289 ary ny AERP 38879 izay nomena ny orinasa JIUXING MINES S.A.R.L, araka ny Didim-pitondrana laharana 33067/2015 tamin’ny 05 novambra 2015.
Antananarivo, faha 06 Jolay 2016
Voninahitra ho anay ny manolotra anao ity taratasy misokatra ity, ho fangatahana fampihatona sy fanafoanana ny fahazoan-dalana hitrandraka nomena ny orinasa JIUXING MINES S.A.R.L. ao amin’ny Faritr’Itasy, mba hitsinjovana ny soa ho an’ny Tanindrazana iombonana.
Efa nanakoako tamin’ny haino aman-jery, ary efa hitan’ny besinimaro eto an-toerana sy any ivelany ny hetsika nataon’ny vahoaka aman’arivony izay manohitra ny fitrandrahana volamena, Zinc, Fer, Plomb, ary Berillium ao Soamahamanina sy amin’ ireo Kaominina roa mpifanolo-bodirindrina azy, dia Arivonimamo II sy Morafeno, izay nanomezana alàlana ny orinasa JIUXING MINES S.A.R.L efa voalaza etsy ambony.
Manaraka izany, adidinay ny milaza fa misy lafiny maro izay mety hisy fiantraikany goavana sy lalim-paka amin’ny fiaraha-monina sy ny toe-karena ary ny ho avin’ny taranaka faramandimby ireto antony voalaza manaraka ireto:
Ny tsy fakana ny hevitry ny mponina araka ny lalana misy.
Tsy fanajana ny zo ny mponina, monina sy mivelona eny an-toerana momba ny fananantany indrindra indrindra (Propriété Privée Non Titrée, loi n°2005-019). Tokantrano an’arivony hatramin’ny vahoaka an’hetsiny maro no ho faty mosary ary vao maika hilentika ao anatin’ ny fahantrana
Ny loza mitatao noho ny fahasimban’ny tontolo iainana: fampiasana ny reniranon’Ikalariana sy Irihatra (fahafatesan’ny zava-manan’aina mivelona amin’ny rano), faharavan’ny ala tapia (faritra arovana), sy ny havoana ary ny lohasaha.
Tsy manan-jo haka ny anjaran’ny taranaka faramandimby isika rehetra.
Noho ireo antony voalaza eo ambony ireo, izahay izay manao sonia eto ambany dia maneho etoana ny firaisankinanay tanteraka amin’ireo mpiray tanindrazana any an-toerana, ary mangataka anao mba hampihato ny tetikasa fitrandrahana volamena, Zinc, Fer, Plomb, ary Berillium ao Soamahamanina sy ny manodidina rehetra, ary hanafoana ny fahazoan-dalana hitrandraka laharana 38234, araka ny Didim-pitondrana laharana 33067/2015 tamin’ny 05/11/2015 sy ny 19970 izay nomena ny orinasa JIUXING MINES S.A.R.L, amin’ny velaran-tany mahatratra 7.500 HA (na 192 efamira, 625 m ny lafiny) ao Arivonimamo II ho an’ny orinasa JIUXING MINES SARL, anisan’ izany koa ny AERP 38879 sy ny 37289 ao Morafeno.
Vonona izahay hifanome tànana aminao amin’ny fitadiavana vaha-olana maharitra sy mifanaraka amin’ny hetahetan’ireo vahoaka ireo.
Mino ary manantena izahay fa tsy latsa-danja noho izany koa ny fahavononana sy ny fitiavan-tanindrazana ao anatinao, izay tokony entinao manontolo hisorohona ny olana miteraka fikorontanan-tsaina, fahaverezam-pivelomana ary tsy fandriam-pahalemana eo amin’ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka.
Eo am-piandrasana ny valiny mahafa-po avy aminao amin’ny fangatahanay, dia raiso, Andriamatoa Filoha, ny fisaorana sy ny haja ambony indrindra atolotray anao.
Ho hitanao ato amin’ity rohy ity ny listry ny olona nandefasana dika mitovy sy ny sonia : Taratasy ho an’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy.pdf